Video:- “Doorashada Qof-iyo-Codkiis haddii aan la heli karin, waxaan horgeynayaa Baarlamaanka waqtiga ayaan dheereyneynaa, ma yeeleyno in Baarlamaanka la yiraahdo wuxuu doonayaa in waqtiga uu dheereysto”. – Idil News
Video:- “Doorashada Qof-iyo-Codkiis haddii aan la heli karin, waxaan horgeynayaa Baarlamaanka waqtiga ayaan dheereyneynaa, ma yeeleyno in Baarlamaanka la yiraahdo wuxuu doonayaa in waqtiga uu dheereysto”.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa sheegay in Guddiga Madaxa Banaan ee doorashooyinka Qaranka, sanadkan 2017-ka, ay Guddoonka usoo gudbiyaan, haddii doorasho “Qof-Iyo-Codkiisa ah” dalka ay ka dhici karto iyo in kale.
“ Barlamaanka labada Aqal ma sugi doono ilaa 2019-ka, ka bacdi in la fiiriyo oo la yiraahdo suuragal matahay doorasho “Qof-iyo-Codkii “ ah, hadda 2017-ka ayaan bilaabeynaa suuragal matahay Haa ama Maya. Guddiga waxaan ka rabnaa in ay xisaabtamaan oo ay noo soo sheegaan in la qaban karo iyo in kale, waxaan heysanaa waqti farabadan” ayuu yiri.
Sidoo kale, Jawaari, waxaa uu sheegay, “Doorashada Qof-iyo-Codkiis haddii aan la heli karin, waxaan horgeynayaa Baarlamaanka waqtiga ayaan dheereyneynaa, ma yeeleyno in Baarlamaanka la yiraahdo wuxuu doonayaa in waqtiga uu dheereysto”.
Guddoomiyaha ayaa sheegay in Guddiga lagula Xisaabtamayo shaqooyinkooda, in ay socdaan iyo in kale.
Waxaa uu Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari uu hadalkaasi uu ka sheegay kulan uu la qaatay Guddiga Madaxa Banaan ee doorashooyinka Qaranka.
Be the first to comment on "Video:- “Doorashada Qof-iyo-Codkiis haddii aan la heli karin, waxaan horgeynayaa Baarlamaanka waqtiga ayaan dheereyneynaa, ma yeeleyno in Baarlamaanka la yiraahdo wuxuu doonayaa in waqtiga uu dheereysto”."